Kedu esi mepụta ihe oyiyi ISO site na disk / faịlụ?
Imirikiti ihe oyiyi ndị a na-agbanwe n'elu Intaneti site n'aka ndị ọrụ sitere na mba dị iche iche dị na usoro ISO. Nke a abughi ihe ijuanya, n'ihi na usoro a na-enye gị ohere iji ngwa ngwa dezie CD / DVD ọbụla, na-enye gị ohere igbanwe faịlụ n'ime ya, ị nwere ike ịmepụta ihe oyiyi ISO site na faịlụ na nchekwa mgbe niile!
Ezi ehihie N'akwụkwọ taa, anyị ga-elele ebe nchekwa kachasị mma maka kọmputa na-agba Windows. N'izugbe, nhọrọ nke nchekwa, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-edekọ faịlụ, abụghị ngwa ngwa. Ọzọkwa, ọ bụghị mmemme niile ndị na-ewu ewu na-enweghị nnwere onwe (dịka ọmụmaatụ, WinRar a ma ama bụ programware program, ya mere nyocha a agaghị agụnye ya).
Kedu ebe nchekwa nchekwa na-agụnye faịlụ ọzọ? WinRar, WinUha, WinZip ma ọ bụ 7Z?
Taa, ọtụtụ nchekwa na-ewu ewu na netwọk, na, na nkọwa nke usoro ọ bụla, a pụrụ ịchọta ya na algorithm kacha mma ... M kpebiri iwepụta ọtụtụ ndị na-edebe ihe nchekwa na netwọk, ya bụ WinRar, WinUha, WinZip, KGB archiver, 7Z ma lelee ha "ọnọdụ. Obere okwu mmalite ... N'iji tụnyere, ma eleghị anya, ọ gaghị abụ oke ebumnuche.
Esi echekwa faịlụ ma ọ bụ nchekwa?
Ndepụta bụ usoro nke ịdebe faịlụ na nchekwa na faịlụ "compressed" pụrụ iche, nke, dịka iwu, na-ewe obere ohere na draịvụ ike gị. N'ihi nke a, enwere ike ịdekọ ozi ndị ọzọ na onye ọ bụla na-ajụ, ozi a nwere ike ibufe ngwa ngwa site na Ịntanetị, nke pụtara na ịchọta ihe ga-achọ mgbe niile!
https://termotools.com ig.termotools.com © Archivers 2020